2012-12-26 @ 21:17 in Andavanandro
Somary sahirana nanao ny lohateny satria tsy mitantara ny noely fa mitantara an-tsary ny nitranga nandritra ny noely na krismasy. Mety ho sarotra azo ny resaka fa dia aleo ny sary no hilaza azy!
Fa efa masaka ao an-tsaiko hatrany ny hoe tsy tsara asiana tsena an-kalamanjana intsony i Antananarivo raha tiana ny mbola haha-renivohitr'i Madagasikara azy, na anaty fefy io na ivelan'ny fefy, fa tsena sy fivarotana anaty trano sisa azo ekena... ka ny fepetran'izany tsena na fivarotana anaty trano izany dia ny fananany efitra fidiovana manara-penitra ao aminy.
Tsy avy ny orana taty amin'ny faritra andrefan'Antananarivo ka nanome lanitra mahatsara vahiny
Efa amin'ny enina ora sy sasany hariva, vitsy sahady sisa ny olona eny an-dalana raha oharina amin'ny andavanandro, vitsy koa ny fiara mpitatitra ka namilafila... indrindra ireo tokony handalo an'Anjanahary na Andravoahangy tsena
Nohararaotina ny naka sary ilay fotoana mba ho toy ny niavaka kely
Fa na eo aza ny ezaky ny olombelona hanatsara ny manodidina azy. Hafa ihany ry zareo ilay vita-nanahary na dia mahazatra loatra eo amin'ny fiainana aza ny mahita azy. Efa tsy mba fahitanay noho ny asa intsony izany filentehan'ny masoandro izany hany ka finaritra sy toy ireny sambany vao mahita zavatra mahafinaritra izany. Soa fa tsy dia ratsy loatra ilay faka-tsarin'ny finday dia mba azo ihafiana ny navoakany.
Mirary fety sambatra ho antsika rehetra amin'ity faran'ny taona ity!
Jentilisa 26 desambra 2012